Mootummaan Itiyoophiyaa Kompiyutara Mormitoota Isaa Cabsee/Hack/ gochuun Seenee Odeeffannoo Walitti Qabuuf Yaalaa Jira: Human Rights Watch
Mootummaan Itiyoophiyaa bifa haaraan cimee kan achii as ba’e basaasa komputera irraa mormitoota isaa irratti geggeessuu kan jalqabe ta’uu jarmayaan mirga namaa HRW beeksisee jira.
Mormitoota biyyootii Afriikaa garaa garaa, US fi Austraaliyaa keessa jiraatan akkasumas sabaa himaalee mormitootaa fi leellistoota mirga namaa irratti kan fuuleffate ta’uu HRW gabaasa qorannaa irratti hundaa’e kan dheengadda ifa godheen beeksisee jira.
Kanneen Komputerri isaanii cabsamee ykn hack ta’uun galmeen isaanii hatamuuf yaaliin irratti geggeessame keessaa tokko OMN. Daayriktera dhaaba kanaa kan ta’e Jawaar Mohammed waa’ee komputerri isaa basaasamuuf yaaliin godhame ennaa ibsu waggaa darbe ennaa dhumaatii Irreechaa odeeffannoo komputera keenya irra jiru hatamuuf yaaliin godhamee ture jedha.
Jawaar akka jedhetti yaaliin godhamus galmeelee keenya akka hin seenne of eeggannoo cimaa nuti gooneen akkasumas hordoffii nuti goonuun nu irratti hin raawwanne. Haa ta’u malee namoonni karaa komputera isaanii ergaa isaan ga’u ennaa banan nama biraa dhufe ilaalcha itti kennuu galmee isaaniif ergamu banuu dura sirriitti ilaaluun gargaaruu danda’a jedha.
Mootumaan Itiyoophiyaa namoota dhuunfaa fi jaarmiyaalee isa morman basaasa komputeraatti gargaaramuun kan irratti fuuleffatu ta’uu ibsa gabaasi Human Rights Watch kun.
Qindeessaa gabaasa jarmayaa mirga namaa kanaa kan ta’an Felix Horn maddi gabaasa jarmayaa isaanii Kanaadaa Toroontoo keessa kan maadheffate qorannaa garee “Citizen irratti ta’uu dubbatu.
HRW irraa Felix Horn akka jedhanitti haleellaalee fi himannaaleen mana murtiitti dhiyaatan kun Itiyoophiyaa keessatti mootummaan sagalee tokko qofti akka dhaga’amu fedhii inni qabu irraa madde jedhan.